ဈ = ဈေးတော့ ကြီးတယ်.. ဒါပေမယ့်……………… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဈ = ဈေးတော့ ကြီးတယ်.. ဒါပေမယ့်………………
ဈ = ဈေးတော့ ကြီးတယ်.. ဒါပေမယ့်………………
Posted by alinsett on Sep 5, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 25 comments
အလင်းဆက် စီးမျော ခံစားခဲ့သောအက္ခရာများ
၀ယ်ဝယ် ဈေးကြီးလိုက်တာ…လို့ ပြောနေရတဲ့ ခေတ်ပါလား..နော် ။
ကော်ဖီမစ်ကလေးတစ်ထုပ် စာသောက်ရဖို့ ကို… 20 g တစ်ထုပ်ကို 100
ကိုယ့်ဘာသာ ဖျော်မသောက်ချင်ဘူးလား…။ ဆိုင်က ဖျော်ပေးတာမှ
250 ကျပ် တဲ့ .။
100 ကျပ်တန်..ကော်ဖီမစ်ထုပ်ကိုပဲ… 250 ကျပ် ပေးလိုက်ရမှာ..လေ ။
ဖျော်တောင်မပေးပါဘူး.။ ခွက်ကလေးတစ်ခွက်ထဲကို ရေနွေး လေး ထည်
့ယူလာပြီး.ကော်ဖီမစ် ထုပ်ကလေးကို ခွက်ပေါ်တင်လာတာ..။
ကိုယ်က ကိုယ့် ဘာသာ ဖောက် ပြီး.ဖျော်လိုက်ရသေး…။
တစ်နေ့2500 ကျပ် လောက်သာ ..ရတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်.. ကော်ဖီတစ်ခွက်
2500 ထဲက… 250 ကျပ် လျော့ပြီ…။
ကော်ဖီမစ်ကလေး တစ်ခွက်စာ..သောက်ရဖို့ ..၀င်ငွေ ရဲ့10%
မုန့်ဟင်းခါးလေးတစ်ပွဲကို… အကြော်လေးတစ်ခုနဲ့ .. ဆို..ရင်.. 400 ကျပ် ။
တစ်နေ့4000 ကျပ် လောက်ရတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက် ရဲ့10 % ပေါ့ ။
တစ်နေ့ကို 4000 ကျပ် မပြောနဲ့.. 3000 ကျပ် တောင်မရပဲ..အလုပ် လုပ်နေရတဲ
့အလုပ်သမားတွေ အများကြီးပါ ။
တချို့ ဆို… 1500 ကျပ်လောက် ၊ 2000 ကျပ် လောက်နဲ့ အလုပ် ဆင်းနေရတာ..တွေ
မနက်..အလုပ်…အသွားမှာ………….. အိမ်က အထွက်မှာ…
တစ်ခုခု အဆာ ခံ ၀ယ်စားဖို့ ………….
အလုပ်ကို အသွား..လိုင်းကား ခပေးဖို့ .( ဖယ်ရီ မရှိသူတွေ..)
အပြန် အိမ် ပြန်မေ၇ာက်ခင်… အဆာပြေ တစ်ခုခု ၀ယ်စားဖို့ ….
ကွမါးတို့ဆေးလိပ်တို့၊ မုန့်ပဲသွားရေစာ တို့ ကြိုက်တတ်သူတွေ ဆိုရင်…
တစ်နေ့ တစ်နေ့ … ကုန်လိုက်မယ့် ငွေ….
တစ်နေ့ဝင်ငွေ ရဲ့ 
ရာခိုင်နှုန်းတွေ…ဘယ်လောက်တောင်များ..ထွက်လိုက်မလဲ… ကိန်းဂဏန်း တွေ နဲ
့တွက် ကြည့် ရင်..ကြောက်စရာ…ပဲ.နော် ။
ထွက်သွားတဲ့ငွေနဲ့အသုံးပြုလိုက် ရသမျှ..အကုန်..ဈေးကြီးတယ်….
၀င်ငွေ ကောင်းတဲ့လူတွေ အတွက်တော့….
ဈေးကြီးတယ်..ဆိုတာ… ပြဿနာ သိပ် မဟုတ်ပေမယ့်….
၀င်ငွေ နည်းပါးလှတဲ့ကျွန်တော်တို့ လိုအောက်ခြေ လူစား ..တွေ
ဈေးကြီးတာ ဟာ…ဧ ရာ မ ပြဿနာ ကြီးတစ်ခုပါ ။
ဈေးကြီးတယ်… လို့ညည်းညူ နေရပေမယ့်….
မ၀ယ်မဖြစ်လို့ .. ၀ယ်လိုက်ရတာတွေ လည်း…အများကြီးပါ ။
အဲဒီ ပစ္စည်းတစ်ခု ဟာ….. ကိုယ့် အတွက် အသုံးဝင်မှု တန်ဖိုး ကြီးမားနေတဲ
ဈေးကြီးတယ်…. လို့မယူဆ မိတော့ပဲ….
ဒီလောက်တော့ ပေးရမှာပေါ့လေ…လို့ဖေါ့ တွေးလိုက်ရပါတော့တယ်..။
၀င်ငွေ / ထွက်ငွေ အတိုင်းအတာ နဲ့ ဆို…
ဒီ နိုင်ငံမှာ…. တော်တော်များများက ဈေကြီးနေတယ်…။
ဈေးကြီးတယ်… လို့ ရေရွတ်ပြီး…. မ၀ယ်နိုင်လို့ ……..
ပြန် ချ ထားခဲ့ ရတာတွေလည်း…. အများကြီးပါ… ပဲ. ။
လိုချင်လျက်နဲ့ …/ လိုအပ် နေလျက်နဲ့ ….. ဈေးကြိးတယ်..လို့ 
မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေ…. အများကြီးမှ အများကြီးပါ..။
ဈေးကြီတယ်..လို့ဆိုရမယ့် အချက် ထက်..ပို
ဒီနေရာ ကနေ…ဟိုနေရာ ရောက်သွားရင်….. ဈေးနျုန်းက…
ပုံမှန်.ဈေးနှုန်း မဟုတ်တော့ဘူး..နော် ။
ရန်ကုန်ကနေ… ပဲခူးေ၇ာက်သွားလို့ ..ဈေ နှုန်း ပုံမှန် မဟုတ်တာကို
သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခ တွေ.. ကြောင့် ဈေးကြိးသွား နိုင်တာကို
( ဥပမာ..ယမ်ယမ် ခေါက်ဆွဲခြောက် တစ်ထုတ်..ကို) 150 ကျပ်
ဈေးထဲ နဲ့15 မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက် ၇င်ေ၇ာက်မယ့် နေရာက ရပ်ကွက် ထဲက
ကုန်စုံဆိုင်လေး ဆီေ၇ာက်သွားရင်…..
180 ကျပ် ။ တချို့ ဆိုင်တွေမှာ…. 200 ကျပ် ။
မြို့ လယ်ခေါင်က ကုန်စုံဆိုင် လို နေရာမျိုးမှာ ဆို… 250 ကျပ် / 300
ဒီလိုပဲ… တခြား..ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေလည်း..ဈေနှုန်းက မှန်ကိုမမှန်ပါဘူး ။
Tissue paper အထုပ်ကလေး… 10 Sheets တစ်ထုပ်ကို..ရပ်ကွက် ထဲက ကုန်စုံ
ဆိုင်းလေးတွေမှာ..50 ကျပ် ။
မြို့ ထဲက.. ဆိုင်တွေမှာတော့…..အဲဒီ 50 တန်လေးကိုပဲ..100 ကျပ် ..တဲ့။
50 ကျပ် တောင် ရောင်းနိုင်သေးတာ…. 100 ဆို၇င်..အတော်လေး..အမြတ်
တကယ်ဆို….စက်ရုံက ဖောက်သည်ပေးတဲ့ ဈေး နဲ့ဖြန့်် လိုက်ပြီ .
ဖြန့် ဝေတဲ့ဈေး နှုန်း အပေါ်မှာ အမြတ် တင်လိုက်ပြီးပြီ…
အမြတ် တင်ပြီးသားကို မှ… နောက်ထက်. တစ်နေရာ.. ( အဝေးကြိးမဟုတ်တဲ့ ..
ဒီတော့.. ၀ယ်ယူသူ တွေ..အတွက်..အခက်ပေါ့ ။.
( သယ်ယူ ပို့ဆောင် ခတွေ..ဘာတွေ မကုန်ပဲ.. အမြတ်တွေ ထပ် တင် ကြတာတွေ
ကိ်ုပြော တာပါ ။)
တခြား…. ရေသန့်ဘူး တို့ .. အချိုရည်ဘူးလေးတွေ တို့ …. ဆေးလိပ် တို
့…. ဘာတို့ ..ညာတို့ ..ပေါ့လေ…
အဲဒီ ..ဟာတွေမှာလည်း. ဈေးနှုန်းမတူညီ တာ…တွေ အများကြီးပါ ။
တစ်နေရာ နဲ့ တစ်နေရာ..ဈေးနှုန်း မတူညီ ..တာတွေ / အမြတ်
တင်ပြီးသားကို…. အမြတ် ထပ် ထပ် တင်နေတာတွေက်ု…
အတော..မသတ်နိုင်တဲ့..လောဘ နဲ့ လည်း… ဆိုင်ပါတယ် ။
ကွာဟမှုကို ထိထိရောက်ရောက်… ညှိ ပေး တာတွေ ဘာတွေ လုပ်မပေးနိုင်တာ နဲ
့လည်း ဆိုင်မယ် ထင်တယ် ။
( ပစ္စည်းတစ်ခုကို လိုချင်သူက များပြီး.. … ပစ္စည်းက .ရှားပါးနေတဲ
မသုံးမဖြစ်လို့ … ၀ယ်သုံးလိုက်ရတဲ့ အခါ….
ဈေးမကြီး သင့်ပဲ..ကြီးနေတာတွေ .တွေ့ နေရတော့….
ဈေး နှုန်းတွေ… တစ်နေရာ တူညီနေရင် ကောင်းမယ်….။
ဈေးကြီးတယ်…လို့ … ညည်းတွားပြီး…မ၀ယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ..အဖြစ်တွေ…
( ဒီ ပို့်စ်ကို စာရိုက်တာ နှေးလွန်းတဲ့ ကျွန်တော်…. တစ်နာရီကျော်
ကြာအောင် ..စာရိုက်ရပါတယ် ။
တစ်နာရီက 400 ကျပ် နဲ့အင်တာနက် အသုံးပြု ခ ပေးပြီး… ရေးနေရလို့ ..
ပိုစ် တစ်ပုဒ် တင်ရင်.. အနည်းဆုံး.500 / 600 လောက် ကုန်ကျပါတယ် ။
ကိုယ်ေ၇းချင်တာလေး…/ ပြောချင်တာလေး..တစ်ခါ တင်ပြရင်…….
အင်တာနက် သုံးခ တွေက
ရွာထဲကို မ၀င်ရရင် မနေနိုင်လို့ …..
စာတွေ မရေးရရင် မနေနိုင်လို့ …
ရွာထဲက ရွာသူ ရွာသားတွေ နဲ့ … မတွေ့ ရရင် မနေနိုင်လို့ ….
ရွသူား မိတ်ဆွေတွေရဲ့ … နွေးထွေးတဲ့ ..စကားလေးတွေ…ကြားရတာ..
ခင်မင် ကျေူးဇူး တင်စရာ.. comment လေးတွေ… ကို ဖတ်ရတာ….
ဈေးတော့….. ကြီးတယ်.. ဒါပေမယ့်……………..
လိုက်ပါ စိးမျော ခံစားခဲ့ကြသော…
ဆွေးနွေး..ကြပါဦး..လို့….
ကျွန်တော်ချစ်သော..ဂေဇက်.. ရွာသူ ၇ွာသား မိတ်ဆွေများနဲ့ …
ကျွန်တော့် ရဲ့ ပိုစ်တိုင်းကို ဖတ်ရှု..ဝေဖန် အကြံပြု ခဲ့ကြသော…
မိတ်ဆွေများ… အားလုံးကို လေးစားစွာ…..
5 .9.2012
တချို့စားကုန်တွေဆို ပိုလို့တောင် ဈေးကြီးသေးတယ်..
သာသနာ့ဝန်ထမ်းနဲ့.. သူတို့ကိုထောက်ပန့်ရတဲ့.. လူထုလုပ်အားတွေအလဟဿဖြစ်တာပေါ့..
နှစ် ၁၀၀၀ ကျိန်စာ.. :?
ထမင်းစားနေတဲ့အလုပ်မို့ … ၀င်မန့်လိုက်ပါတယ်ဗျို့ …
ကျုပ်တို့တွေ စနစ်မကျတာ ရှေးစွန်းဆွဲတာ နဲ့ပဲ
ဆိုင်တွေမှာ တခွန်းဆိုင် တံဆိပ် ကပ်ထားတဲ့ ရောဂါ ပျောက်သွားပြီလားဗျာ..၊
အမြတ်အစွန်းကို လက်တဆုံး နှိုက်ချင်တဲ့ အကျင့်ဆိုး မပျောက်သရွေ့တော့…
Lawson ၀င်မယ် 711 ၀င်ပြီ … လာဦးမယ် အနောက်က ဆရာတွေ
သူတို့ ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ရင် (ဈေးကြီးတယ် ဈေးချိုတယ် ဆိုတာ နှိုင်းရ တန်ဖိုးမို့ မဆွေးနွေးလိုပေမယ့်)
ဈေး တူတယ် .. ဈေးမှန်တယ် .. သည်လို ပြောနိုင်ရဲ့ …။
သူတို့ ရဲ့ capital အပမာဏ ဖြန့်ကျက်နိုင်စွမ်းအား က အလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ
မြို့ကြီးပြကြီးတွေရဲ့ ရပ်ကွက်တိုင်း မှာ ရှိတယ် ဆိုတဲ့အဆင့်ထိ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း သက်သေပြပြီး ဖြစ်တယ်..
မြို့ပြ လူနေမှု ရဲ့ ရပ်ကွက်တွေထဲ သွားကြည့်ကြည့်ပါ..။
မြေညီထပ် တွေမှာ အိမ်ဆိုင်တည် တာ ယဉ်ကျေးမှု တခု ဖြစ်နေတာကြာပါပြီ။
ဈေးတွေ မညီတာ (အမြတ်လက်တဆုံး နှိုက်လိုတာ) ကတော့
ဆိုတော့ ..ဟိုဆြာဒွေလာရင် … အနှီ အိမ်ဆိုင်တွေ သေပါမယ်။
ဆိုကြပါစို့ ကျနော် ဘီယာ တစ်ဗူးသောက်ချင်ရင် ၅၀-၁၀၀ ဈေးပိုများတဲ့ အိမ်ဓားလွယ်ခုတ်ကဆိုင်အစား
လမ်းထိပ်ထိ လမ်းလျောက်ပြီး ဈေးမှန်တဲ့ Lawson ကနေ ၀ယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။။
လူတိုင်း နီးပါး သည်လို ဖြစ်လာမှာပါ .. ။ ခြင်ဆေးခွေ အစ ဆပ်ပြာမှုန့်အလယ် အာလူးကြော် အဆုံးပေါ့လေ…။
ထပ်ပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့ … အိမ်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှုဟာ ..သူရို့ရဲ့ ကျပ်တည်းမှု
မီးဖိုချောင်စားရိတ် မလောက်ငှမှုကို ထောက်ကူဖြေရှင်းတဲ့ အလုပ်တခုပါ။ (ဘယ်အိမ်ရှင်မ မှ
စီးပွားပြေလည်နေရင် အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး အိမ်ဆိုင် မတည်ချင်ပါဘူး) …
ခုလို ဈေးမမှန်မှု ..ဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ သူရို့ရဲ့ ထောက်တိုင်တွေ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ရိုက်ချိုးသလို
ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး ..။ နိုင်ငံအဆင့် ပြောရရင်တော့ အိမ်တွင်း လုပ်ငန်းငယ်တွေ အသေးစား
အရောင်းအ၀ယ်တွေ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်း FMCG တွေ ကနေ ရရမယ့် Retail အမြတ်အစွန်းတွေအားလုံးကို
တိုင်းတပါးကို စီးဆင်းမယ့် အလားအလာတွေ လို့ မြင်မိပါတယ်။
တစ်ခါတလေ မဒမ်ခ ရုံးပိတ်ရက်ဟင်းစားဝယ်ရန် ဈေး သွားရင် ခင်ခတို့က ဈေးခြင်းဆွဲပြီးလိုက်ရတဲ့အခါ
တစ်လနဲ့တစ်လ ၀ယ်တဲ့ပစ္စည်းတူပေမယ့် ဈေး မတူတာကို သတိထားမိတယ်၊ ဈေး ထဲမှာ ဈေး ကြီးတာတွေ ကို ဈေး လိုက်ရင်ကြားနေ မြင်နေရပေါ့ဗျာ။တစ်ချို့ပစ္စည်းတွေကျတော့လည်း ဈေး ဆစ်တတ်ရင် ဈေး သယ်က ဈေး လျော့ပေးပြန်ရော။တစ်ချို့ကြ ဈေး နှုန်းမှန်ရောင်းကြပြီး၊ တစ်ချို့တော့ လူကဲခတ်ပြီး ဈေး နှုန်းကို လိုသလို ပြောရောင်းတာလည်း ကြုံရတယ်ဗျာ။ မဒမ်ခက ဈေး သွားပြီဆို ဈေး ကို နှစ်ခါ သုံးခါ ပတ်ကြည့်တတ်တဲ့အလေ့ရှိသမို့ ဈေး ခြင်းလိုက်ဆွဲရင်း ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျောက်ဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားပြီး ခင်ခ တစ်ယောက်လည်း ဈေး လိုက်ဖြစ်နေတယ်လေ။
ဈေးကြီးတာထက် ဈေးမမှန်တာလို့ဘဲပြောချင်တော့တယ်။ အ၀တ်အထည်ဈေးနှုန်းဆိုပိုဆိုး ဟိုတလောက ကဆာမိရေးတဲ့ပို့စ်ထဲကလို ပုံပုံစတိုးက ပစ္စည်းတွေ ရှော့ပင်စင်တာမှာ တံဆိပ်ကပ်ရောင်းရင် ၁၀ဆလောက်ကွာတာမျိုးပေါ့။ အသားဈေး ငါးဈေး ဟင်းရွက်ဈေး ၅၀၊၁၀၀ပိုများနေရင် ပေးလိုက်ချင်ပေမဲ့ မီနီမတ်လိုဆိုင်တွေမှာ လူသုံးကုန် အလှကုန် ဘာဘဲဝယ်ဝယ် ၅၀လောက်ပိုတောင်းရင် မပေးချင်တော့ဝူး။ ဈေးသက်သာတဲ့ ဈေးမှန်တဲ့ ၀ယ်နေကျဆိုင်ဘဲရောက်အောင်သွားတော့တယ်။ ဈေးကြီးမှာကြောက်လို့ ဈေးပတ်ရတာတော့နဲနဲမောတယ်ဗျာ။
အင်းဗျ အပြိုင်အဆိုင်တွေနဲ့ မို့ အင်တာနက်သုံးခ တစ်နာရီ ၃၀၀ လောက်ဖြစ်
သွားပြီ။အစ်တုန်းက ၁၀၀၀ လေဗျာ။
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ လည်သူစားတဲ့  ကတုံးပေါ်ထိတ်ကွက်တာ
အကျင့် ပါနေကြပြီလေ။ မောင်ဂီပြောသလို ခံရဖို့ အကြောင်း
တွေလဲရှိနေပြန်တယ် ။ ပင်ပန်းသမျှရွာထဲ အပနးဖြေရတာလဲ
အကျင့်ဖြစ်နေပြီ ။ လာနေကြသူတွေမတွေ့ ရင်တောင်
ပို့ စ်တစ်ခုတင်ဖို့ အတွက်
ကျုပ်လိုမျိုး ပွဲကြိုအထောက်အကူပြု ဘောလုံးခန့် မှန်းပို့ စ်တင်မယ်ဆိုရင် ၊ limso.net , asianbookie.com , soccerhot.com , sbo.bet , 68tip.com , goal.com , goonerguides.com , goals88.com အစရှိတဲ့ ဝက်ဆိုက်ပေါင်းစုံကနေ အချက်အလက်တွေလိုက်ရှာ ၊ လူစာရင်းတွေ စုတုပြု ၊ ပြီးရင် ကိုယ့်အာဘော်ပြန်ထည့် ၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ခန့် မှန်းတာကို ရေးနိုင်ဖို့ ရှေ့ ပွဲတုန်းက ဘယ်လို ကန်ခဲ့ကြသလဲ ထိုင်စဉ်းစား ၊ ခေါင်းတွေမူး ၊ မျက်စိတွေ မှုန်ဝါးလာ
ဘယ်သူပေးတဲ့အလုပ်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝါသနာပါလို့ ထိုင်ရေး
ရွာထဲက ပို့ စ်တွေကို ကွန်မင့်ပေးဖို့ ကလဲ ပို့ စ်ကို သေချာဖတ်ရသေး
အူး………….. သဂျီး ပွိုင့်များများတိုးပေးမှ နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းလာမှာ ပဲ
ဒီတစ်ခါ ဒီလူဂျီးပြောတာ ထောက်ခံ၏ …
သဂျီးက ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်မှ ၃၀ ..
အင်တာနက် ဖိုးဂ ၄ ၅ ရာ ..
ဒီဒေါ့ဂါ .. သဂျီး ပွိုင့်တိုးပေးဘာ ..
မတိုးပေးရင် အနော်ရထာ ကြောင်ကြီးဂ
နယ်တစ်ဖက်ထိ လိုက်ပြီး တိုက်မှာဒဲ့ ..
သူကြီးကတော်ကလည်း သူကြီးကို ရှင့် လူတွေက ဈေးကြီးလိုက်တာ လို့ ပြောနေမယ်ထင်တယ်နော် … :grin:
ဈေးကြီးနေတာတော့ ပြောမပြောချင်တော့ဘူး..ကမ္ဘာနဲ့အမှီ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းပါပဲ..။
(ခရီးထွက်နေတာနဲ့ ဇ တောင် အခုမှ ပေါင်းဖတ်ဖြစ်တယ်)။
ဈ – ဈေကြီးပေမဲ့
လ- လူမွှေး လူတောင်
စ – စနစ်လား
ဇ နဲ့ ဈ အခုမှပေါင်းဖတ်ရတော့တယ်။
မိရွှေကြည်လည်း လခထုတ်တာနဲ့ ငွေကိုဝေပုံချပြီး လကုန်အထိကာမိဖို့ကို အကောင့်တစ်ယောက်လိုပဲ
တွက်လိုက်ချက်လိုက်နဲ့…… အင်းလေ ဒီလိုနဲ့ပဲအားမွေးပြီးရှေ့ဆက်ရမှာပ။
ဈေးနှုန်းကွာဟမှုတွေ လူတန်းစားကွာဟမှုတွေ များနေတဲ့ အခြေအနေတခုကနေ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုတွေများ ပြုတ်ကျထွက်လာမလဲ တထင့်ထင့်ပဲ။
လောလောဆယ်တော့ ငွေတိုးချေးစားသူတွေ အတွက် ဥပဒေတခု ပြဌာန်းလိုက်ပြီ။
ဈေး ကြောင့် ဇိမ် မရှိ ဖြစ်ကုန်တာကိုး .. :grin:
ဈေးကတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ရင် ပျမ်းမျှကတော့သိပ်မကွာပါဘူး..ကွာတာက ရတဲ့လစာ.. သူများ အောက်ခြေအလုပ်ရုံဝန်ထမ်းက အနည်းဆုံးတစ်နာရီ ၁၇ကျပ်လောက်ရတဲ့အချိန်ကျမတို့ဆီက ၀န်ထမ်းတွေက တစ်နာရီ Abt 30 cents လောက်နဲ့လုပ်နေရတာဆိုတော့လေ..
တစ်နေ့က ပိုစ့် တင်ပြီးတာနဲ့ ….
ရွာ ထဲ ၀င်လို့ကိုမရတော့တာာ…။
မနေ့ကလည်း.. ပိုစ့် ကို စာလုံးမှား နေတာလေးတွေ..ဘာညာ ကွိကွ ပြင်ဆင်မယ်. ဆိုပြီး..
ရွာထဲ ၀င်တာ..ဘယ်လိုမှ ၀င်လို့ မရ….။
အခုမှ ပဲ… ရတော့တယ် ။ရွာ ပျက်ပြီ.ဆိုပြီး.ငိုမိတော့မလို့ … ။ အခုမှ ရင်ထဲက အပြားကြီး.ကျ..သွားတော့တယ်.။
ကျွန်တော့် ပိုစ့်ကို ဖတ်ရှု..
ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ … စာချစ်သူ မိတ်ဆွေ များအားလုံးကို…
ရင်ထဲကနေ..ပြောမပြ တတ်အောင် ကျေူးဇူး တင်ပါတယ်..လို့ .။
တစ်ယောက်ချင်းစီ…ကို ကျေးဇူးတင်နေပါတယ် ..လို့ …
ဈေးကြီးတာကတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့။ နေ့စဉ်စားကုန်တောင် တနေ့နဲ့တနေ့မတူသလို တဈေးနဲ့တဈေး မတူတာတွေတွေ့နေရတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ နေ့စဉ်ဟင်းချက်စရာတောင် အိမ်နဲ့နီးတဲ့ဈေးကိုမသွားရဲလို့ အိမ်နဲ့ ဝေးတဲ့ဈေးကိုပဲတကူးတကအပင်ပန်းခံသွားနေရတယ်။
ကြားထဲမှာ…Comment တွေ ပျောက်နေတယ်ဂျ ။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို ဝေဖန်ထားကြတာတွေကို သဘောကျမိပါတယ်
ကွန့်မန့်တွေက.. ရှယ်တွေ. ။